3 အိပ်ခန်းများ အိမ် ရောငျးခခြွငျးသို့မဟုတျငှား အတွင်း South Okkalapa, Yangon
တောင်ဥက္ကလာပရှိ ငှားရန် ရောင်းရန် လုံးချင်း (ID-1278)
Yangon, South Okkalapa
Sale: Lks 3,000
Rent: Lks5/ လ
( Min. 1 နှစ် contract )
ပိုင်ဆိုင်မှု အိုင်ဒီ: 1278
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် သံသုမာလမ်းသွယ်တွင်တည်ရှိသော ငှားရန် ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်ိ။ မြေအကျယ် - ၂၄၀၀ စတုရန်းပေအတွင်းရှိ တစ်ထပ်လုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ ဧည့်ခန်း၊ နှစ်ယောက်အိပ်ခန်း တစ်ခန်း၊ အိပ်ခန်းငယ် နှစ်ခန်း၊ ထမင်းစားခန်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့် ရေချိုးခန်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ဖုန်းလိုင်း၊ ပါဝါမီတာနှင့် ရေလိုင်း (ဂျိုးဖြူ နှင့် အ၀ီစီ) များ အသင့်ပါရှိပါသည်။
လုံးချင်းအိမ်၏ ငှားရမ်းခဈေးနှုန်း - ၅ သိန်း (ညှိနှိုင်း)
လုံးချင်းအိမ်၏ အရောင်းဈေးနှုန်း - သိန်း ၃၀၀၀ (ညှိနှိုင်း)
222.96 Sq.M. Land area
Listing provided by , တာမွေမြိုနယ်, Tamwe, Tamwe, Yangon. has 1,049 other listings.
Other searches in South Okkalapa
ရောင်းရန်ပိုင်ဆိုင်မှု အတွင်း South Okkalapa
ရောငျးရနျကှနျဒို အတွင်း South Okkalapa
ရောင်းရန်အိမ် အတွင်း South Okkalapa
ငှားရန်ပိုင်ဆိုင်မှု အတွင်း South Okkalapa
ငှားကှနျဒို အတွင်း South Okkalapa
ငှားရန်အိမ် အတွင်း South Okkalapa